पुजा शर्माको 'रामकहानी' हेरेपछि सबै दर्शकले भन्नेछन वाउ ! पूजा, आकाश र माग्नेको तारिफै तारिफ - सुदूरखबर डटकम
पुजा शर्माको ‘रामकहानी’ हेरेपछि सबै दर्शकले भन्नेछन वाउ ! पूजा, आकाश र माग्नेको तारिफै तारिफ
काठमाडौँ । गत शुक्रबारदेखि प्रर्दशनमा आएको सुर्दशन थापा निर्देशित फिल्म रामकहानीले आक्रामक ब्यापार गरिरहेको छ । कमेडी कलाकारहरुको बाहुल्यता हुनुले चलचित्र हेरिरहँदा दर्शकहरुलाई पुरै मनोरञ्जन दिन्छ । केदार घिमिरे, विल्सनविक्रम राई, रविन्द्र झा लगायतका हाँस्यकलाकारहरु दर्शकको खुलेर हास्ने माध्यम बनिदिएका बेला पूजा शर्माको लोभ लाग्दो फ्यान फलोइङले पनि चलचित्रलाई फाइदा पुर्याएको छ । अझ त्यसमा ह्याण्डसम हिरो आकाशको गज्जबको अभिनयले त झन् महिला फ्यानहरु फिदा भएका छन् ।
यसैबिच चलचित्र रामकाहानी यूनिटले आइतबार काठमाडौँको कुमारी हलमा प्रेस शो समेत देखायो । लचित्रमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ बीचको प्रेमलाई निकै आकर्षक ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको मत्रै छैन नेपालमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यापछि खाडी मुलुकमा गएर सर्वसाधारणले भोग्नु परेको दुखलाई नजिकबाट केलाइएको छ ।